निजगढ नै अन्तिम विकल्प हो, रुख नकाटी विमानस्थल बन्दैन [भिडियो अन्तर्वार्ता] « हाम्रो ईकोनोमी
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थलको रुख कटानीको विषयलाई लिएर विभिन्न खालका बहसहरु सुरु भएका छन्। विमानस्थल निर्माण र यससँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरुका विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका
निर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग नेपाल लाइभका उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानी :
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवदेनको विषयलाई लिएर अहिले आम जनसमुदायमा दुई पक्षबाट बहस सुरु भइरहेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन केका लागि र कसका लागि ?
अहिले सुरु भएको सकारात्मक र नकारात्मक जिज्ञासालाई अस्भाविक ठान्नु हुन्न। सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर नामकरण पनि गरिसकेको छ। किन चाहियो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलरु भन्ने विषयमा कुरा गर्दैगर्दा अहिले नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र हो।
निर्माणको चरणमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । यी ३ वटै विमानस्थलहरु अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आइकाओ० को स्टान्डर्ड र मापदन्डअनुसार धैरै कुरा लागू हुन सक्दैन। यी ३ वटै विमानस्थल फुल फेज विमानस्थल भित्र पनि पर्दैनन्। किनकि काठमाडौं विमानस्थलको पनि आफ्नो सीमितता छ भने पोखरा र गौतमबुद्धको पनि उस्तै छ।
तपाईंले यो नै अन्तिम विकल्प भन्दैगर्दा अन्य सातवटा स्थानमा पनि अध्ययन भएको थियो। अन्य ठाउँको तुलनामा निजगढको विषयमा कति अध्ययन भएर यही नै उपयुक्त ठाउँ भनिएको होरु अन्य स्थान कहाँकहाँ थियो?
के हामीलाई विमानस्थल मात्रैले पुग्दैनरु किन हवाई सिटीको परिकल्पना गरियो?
पहिलो चरणमा विमानस्थल र हवाई उडानका लागि आवश्यक संरचना मात्रै निर्माण हुन्छ। सुरुमै चरणमै हवाई सिटीको काम गर्ने होइन। हामी एउटा रन वे, टर्मिनल भवनलगायत हवाई यातायातका लागि आवश्यक संरचनामात्रै निर्माण गर्छौं। यसका लागि २५ सय हेक्टर जंगल आवश्यक पर्छ। यसमा एक सय ११० विघा निजी जग्गा छ। अहिले अधिग्रहणको काम भइरहेको छ। अहिलेसम्म ६० प्रतिशत काम सकिइसकेको छ। अधिग्रहण भएका जग्गा नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणको नाममा आइसकेको छ। जनताले पनि चित्त बुझाएका छन्।
यो विमानस्थल निर्माणको कुरा १९९० को दशकमै आएको थियो। तर, यस बीचमा क–कसले अध्ययन गरे। के भनेरु त्यो हामी भन्दै छौं। कतिपय कुराहरु डकुमेन्टमा पनि आइरहेको छ। तर, यो विमानस्थल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा र काम थालनी सन् २०११ बाट सुरु भएको हो। विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुसँग बुट मोडेलमा विमानस्थल बनाउने भन्दै विमानस्थल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उसको रिपोर्ट सरकारले ग्रहण पनि गरिसकेको छ।
त्यही कारण हामीले निजगढको हकमा मास्टर प्लान बनाउन लागेका हौं। हामी यो चरणका यी काम गर्छौं, यस्तो छ हाम्रो योजना भनेर एकिन भएपछि मात्रै मोडालिटीका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने हो। कसैले निजगढ विमानस्थल हामी बनाउँछौ भनेर प्रस्ताव गरेको अवस्थामा हामीले उसलाई दिने डकुमेन्ट के तरु उदाहरणका लागि तीन वटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको अवस्थामा यो ठिक भनेर छनोट गर्ने आधार के तरु यिनै कारण हामीले मास्टर प्लान तय गर्न लागेका हौं। मोडालिटी र मास्टर प्लान फरकफरक कुरा हुन् ।
किन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तयारी नभएकै अवस्थामा हतारहतार एक वर्ष अगाडि नै आर्मीसँग रुख कटानीका लागि सम्झौता गरियोरु काटेका रुख कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
नेपाललाइभ बाट साभार
तपाईंसमेत संलग्न रहेर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेबारे गोप्य बैठक भएको हो ? प्रधानमन्त्रीको
थप २९३ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या १५ हजार ७ सय ८४ पुग्यो
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या १५ हजार सात सय ८४ पुगेको
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लक्षण नभएका व्यक्तिहरुको कोरोना परीक्षण गर्न नपर्ने
थप २९३ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या १५ हजार ७ सय…